फेसबुकबाट यसरी कमाउनु होस् पैसा ? – Life Nepali
फेसबुकबाट यसरी कमाउनु होस् पैसा ?
फेसबुकबाट आफ्नो कुरा सेयर गर्ने, म्यासेज गर्ने मात्र होइन तरिका जाने पैसा पनि कमाउन सकिन्छ। फेसबुकले यसको लागि प्लेटफर्म बनाएको छ, अप्सन दिएको छ। प्रयोगकर्ता चाहे फेसबुकमै रहेर घर बसीबसी पैसा कमाउन सक्छन्। यसको लागि सबैभन्दा पहिले फेसबुकमा पेज बनाउन जरुरी छ। पेज दैनिक अपडेट गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो। यसले ‘पेज रिच’ बढाउँछ। रिच बढ्दा फेसबुक आफैले पेज स्कान गरिदिन्छ। पेजमा लाइक हुनु मात्र महत्वपूर्ण हुदैन, पेजमा कति इन्गेजमेन्ट छ सो अनुसार पेजको रिच तय हुन्छ। इन्गेजमेन्ट भन्नाले पेजमा पोस्ट गरिएका जानकारी कतिले लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरे, सो अनुसार पेजको रिच बढ्ने गर्छ।
पेज रिच राम्रो भएपछि विज्ञापनको लागि फेसबुकसंग कन्ट्याक्ट गरि धन आर्जन गर्न सकिन्छ। कुनै स्थानिय प्रडक्टस्को विज्ञापन पनि आफ्नो पेजबाट गरिदिन सकिन्छ। तर यसको प्रभावकारीता भने प्रयोगकर्ताकै मेहेनतमा भर पर्छ। यसको लागि फेसबुकको एड्भान्स युजर बन्नु पर्छ। फेसबुकको एक फर्म भर्न सकिन्छ। जसमा बैंकको जानकारी, जस्तो अकाउन्ट नम्बर लगायत अन्य जानकारी भर्नु पर्छ। फर्म भनेको ४८ घण्टामा एकाउन्ट एक्टिभ हन्छ। यस पश्चात फेसबुकले प्रयोगकर्ताको हरेक एक्टिभिटी निगरानी गर्दछ। आफुले कमाएको पैसा सोही बैंक अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ।
साना व्यावसायीको लागि अप्सन:
क्लिक टु म्यासेज अप्सनको मद्धतले ग्राहकले बिना फोनकल कम्पनीसंग सम्पर्क गर्न सक्दछन्। यो सिस्टम अहिले टेस्ट भइरहेको छ। कसरी सहभागि हुने फेसबुकको अडियन्स नेटवर्कमा ?
तपाईँसँग कुनै विषयमा लेखन सम्बन्धी ज्ञान छ वा समाचार लेखेर पनि इन्स्टेन्ट आर्टिकल बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सजिलो पनि छ। यसको लागि एउटा व्लग वा वेबसाइट र फेसबुक पेज बनाउनुपर्छ। वेबसाइट बनाउने तरिकाः यदि आफ्नै वेबसाइट छ भने वेबसाइट बनाउनु पर्दैन। http://namastehost.com मा गएर आफ्नो अकाउन्ट बनाउनुहोस् आफुलाई मनपरेको डोमेन खोज्नुहोश र होस्टिंग प्लान रोज्नुहोश यसको न्युनतम शुल्क लाग्ने छ।
फेसबुक पेज बनाउने तरिकाः फेसबुकको पेज अप्सनमा गएर क्रिएट पेजमा क्लिक गरि मागिएका विवरणहरू भर्दै गए फेसबुकमा पेज बनाउन सकिन्छ। यसरी वेबसाइट र फेसबुक पेज बनाइसकेपछि आफ्नो व्लग वा वेबसाइटलाई इन्स्टेन्ट आर्टिकल बनाउनुपर्छ।
https://instantarticles.fb.com मा गइ साइनअप गर्नुपर्छ। त्यसपछि आफूले बनाएको फेसबुक पेजलाई सेलेक्ट गरि एक्सेस इन्स्टेन्ट आर्टिकल टुलमा क्लिलिक गर्नुपर्छ। अब फेसबुकको पब्लिसिङ टुल खुल्ने छ त्यहाँबाट आफूले बनाएको वेबसाइटलाई कनेक्ट गर्नुपर्छ। त्यहाँ कनेक्ट योर साइट भन्ने मा क्लिक गरेपछि कालो बाकस भित्र एङगल ब्राकेट भित्र कोड देखिन्छ त्यसलाई कपि गर्नुहोस् र वेबसाइट डटमकामा गई थेम मा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारी वा कुनै सहयताको लागीको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
Previous कोरोना राहत कोषलाई १ वर्षको तलब दिने नारायणकाजी श्रेष्ठकाे घोषणा
Next संकटको समयमा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको तलब कट्टी नगर्ने सरकारको निर्णय
स्वीस बैंकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ५५ लाख डलर रहेको खु’लासा !
लगातार बढिरहेको सुनको मुल्य , आज भने घट्यो ! तोलामा कति पुग्यो ? हेर्नुहोस-
फेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मुल्य ! तोलामा कति पुग्यो ? हेर्नुहोस !